Macluumaad af soomaali oo ku saabsan naas nuujinta - Imetystietoa somalin kielellä – Imetyksen tuki ry
Macluumaad af soomaali oo ku saabsan naas nuujinta – Imetystietoa somalin kielellä
Hambalyo ilma idiin dhashey! Noloshaadu markey ilmo kuu dhashaan waa wakhti aad muhiim ah!
Beejkan waxaad ka aqrisan kartaa ama aad ka daabacan kartaa warbixin qaabka naas nuujinta, jadwalka ilmaha, siinta cuntada culus iyo sida amaanka ah eed masaasad wax ugu siin karto.
Xoggahaan dhammaantoodna waa mid asalkeedii loo sameeyey dadka finnishka, talosiinta bulshadana waa mid ay aqoonyahanada daryeelka caafimaadku xaqiijiyeen.
Haddii ay naas nuujintu kugu adkaato ama ku xanuuno naaska, caawimo weydiiso rugta dhalaanka iyo hooyooyinka. Sidoo kale waxaad soo degsan kartaa barnaamijka/software Rinnalla. Barnaamijkaas waxaad ka heli kartaa caawimo dhanka naas nuujinta iyo waalidnimada oo luuqado badan ku qoran. Caawimada waxaa bixiya si iskaa wax uqabso ah caawiyaasha hooyooyinka carruurta nuujinaya. Iyagu waa hooyooyin caadiya kuwaasoo iskuul isoo dhigtey, qabiirna ku ah naas nuujinta.
Nuujinta ugu horeysa (pdf)
Xogta iyo ka caawinta nuujinta (pdf)
Wakhtiga ilmaha (pdf)
Waa xiligii loo billaabi lahaa raashinka! (pdf)
(On kiinteiden ruokien aika!)
Xiliyada siinta maasaasasda ilmaha (pdf)